नेपाल आज | ‘विगतमा मिस नेपाल भएकाहरुलाई हेर्दा यहाँ पैशाको खेल हुन्छ जस्तो लाग्यो’ (भिडियोसहित)
‘विगतमा मिस नेपाल भएकाहरुलाई हेर्दा यहाँ पैशाको खेल हुन्छ जस्तो लाग्यो’ (भिडियोसहित)
शुक्रबार, १९ जेठ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
जेठ १९ । ‘अनिता लिम्बु’ नेपाली मोड्लिङ जगतमा उदाउँदै गरेको नाम हो । लण्डनमा बस्दै आएकी उनी हालै त्यहाँ भएको ‘मिस स्पार्कलिङ ब्यूटी प्याजेन्ट’ मा फस्ट रनर अप भएकी छिन् । त्यतीमात्र होइन, उनले प्रतियोगितासम्बन्धी पनि दुईवटा टाइटल जितेकी छिन् । पहिलो, ‘मिस ट्यालेन्ट’ र दोस्रो ‘मिस च्यारीटि’ ।
उनै लिम्बुले आफ्नो उपलब्धी र मिस नेपालको बारेमा नेपाल आजसँग अन्तरंग कुराकानी गरेकी छिन् । मिस नेपालको प्रतियोगितामा किन भाग लिनुभएन ? भन्ने प्रश्नमा उनले सहज जवाफ दिइन् । ‘कामको व्यस्तताले पनि भ्याइन र अरुलाई पनि मौका दिनुपर्छ ।’ आफूले मोडलिङको क्षेत्रमा थोरै भएपनि उपलब्धी हासिल गरिसकेको र अब अरुलाई पनि मौका दिनुपर्ने प्रष्ट्याइन् ।
मिस नेपालमा मोडलिङको क्षेत्रमा चर्चा कमाइसकेका प्रतियोगी निती शाहले पनि भाग लिएकी छिन् । उनी मिस नेपालमा आएको उनका फ्यानहरुले नै मन पराएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचनात्मक चर्चा धेरै सुनिएको छ ।
लिम्बुलाई पनि नितीको हाउभाउ मन नपरेको बताउछिन् । भन्छिन् ‘नीति शाहको नाम मैले पनि सुनेकी छु । उहाँ हेर्दा आकर्षक छन् । तर, उहाँले बोलेका भिडियोहरु सार्वजनिक भइसकेपछि उहाँ त्यस्तो ‘वाउ’ गर्ने खालको लागेन ।’ उनी थप्छिन्, ‘मोडलिङमा पहिला पनि चर्चा पाइसकेकाले उहाँले अरुलाई पनि मौका दिनुपर्ने थियो । उहाँले जुन तरिकाले बोल्नुहुन्छ त्यो मलाई त्यति प्रतिस्पर्धी लाग्दैन ।’
मिस नेपालमा भ्रष्टाचार हुन्छ, हुने गरेको भन्ने चर्चा बर्षेनी चल्ने गरेको छ । तर, आजसम्म कसैले यसलाई पुष्टी गर्न सकेको छैन् । यस विषयमा के लाग्छ त लिम्बुलाई ? उनी सहज जवाफ दिन्छिन्, ‘पछिल्लो समयको इतिहास देख्दा यसमा राजनीति हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’ तर, बिदेशमा हुने यस्ता सुन्दरी प्रतियोगितामा राजनीति भएपनि आफूमा खुबी भने हुनै पर्छ ।’ उनी अहिलेसम्मको मिस नेपाल मध्ये माल्भिका सुब्बाको प्रंसशक हुन् ।
आज साँझ ७ बजेपछि प्रारम्भ हुने मिस नेपाल–२०१७ को ग्रान्ड फिनालेमा देशका विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने १९ जना सुन्दरी मिस नेपालको उपाधिका लागि कडा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
ताप्लेजुङमा जन्मिएपछि लिम्बुलाई एक वर्ष हुँदा नै इटहरी लगियो । त्यहीँ उनले आफ्नो बाल्यकाल बिताइन् । कक्षा १२ को पढाइ सकेर उनी बेलायत पुगिन् । अहिले उनी दोस्रो पटक नेपाल आएकी हुन् ।
सानैदेखि नाच्न र गाउनमा पोख्त उनी मोडलिङकै दुनियाँमा रमाउन थालिन् । बेलायतमा भएको मिस स्पार्कलिङ ब्यूटी प्याजेन्टमा उनले आफू बस्ने शहर स्वीनडेनको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । विदेशी प्रतिस्पर्धीसँग उक्त प्याजेन्टमा एकदमै प्रतिस्पर्धा भएपनि आफूले एकदमै रमेर उक्त प्याजेन्टमा भाग लिएको बताउँछिन् । त्यसभन्दा पहिला पनि उनी धेरै रनवे र फेसन शोहरुमा भाग लिँदै आएकी थिइन् । उक्त टाइटल जितेपछि उनले बेलायतको अक्सफर्ड फेसन वीकमा पनि भाग लिने अवसरहरु पाइन् ।
यतिबेला उनले नेपालमा दुई तीनवटा म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी छिन् ।
anita limbu miss nepal corruption